लगानीकर्तालाई एनबीए अध्यक्ष दाहालको टिप्सः कस्ता कम्पनीको सेयर कहिले किन्ने र बेच्ने ? – BikashNews
लगानीकर्तालाई एनबीए अध्यक्ष दाहालको टिप्सः कस्ता कम्पनीको सेयर कहिले किन्ने र बेच्ने ?
२०७८ भदौ २१ गते १३:३९ भुवन दाहाल
कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्दा हेर्नुपर्ने केही निश्चित आधार र विषयहरु हुन्छन् । त्यस्ता आधार विषयहरु नहेरी गरिएको लगानीले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।
सेयर किन्दा हेर्नुपर्ने विषय भनेको त्यसको व्यवस्थापन कस्तो छ, संचालक समिति कस्तो छ र उच्च व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने हो । उनीहरु कर्पाेरेट गभर्नेन्समा बस्छन् कि बस्दैनन् भन्ने कुरा हेर्ने हो । नीति नियम पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेर्ने हो । किनभने कुनै पनि कम्पनी वा संस्था संचालन गर्ने भनेको व्यवस्थापन, संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले नै हो ।
जस्तो कि कुनै पनि राजनीतिक दल कस्तो छ भनेर हेर्दा त्यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु कस्ता छन् भनेर हेर्छाैं । नेतृत्व तहमा बसेका मान्छेहरु (नेताहरु) राम्रा छन् भने नीति नियम पनि राम्रा बन्छन्, बनाउँछन् । कम्पनीको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
आज लगानी गरेर भोलि फाइदा खोज्नेहरुले कम्पनीको व्यवस्थापन वा संचालक समितिमा के कस्ता व्यक्तिहरु छन् भनेर त्यति हेरे जस्तो लाग्दैन । तर, लामो अवधिको लागि लगानी गर्नेहरुले भने यस्ता कुराहरु हेरेको पाइन्छ । लगानीकर्ताले बैंकहरुको वेबसाइट वा वार्षिक प्रतिवेदनमा हेरेर कम्पनीको व्यवस्थापन, संचालक समिति, उच्च व्यवस्थापन जस्ता निकायमा रहेका व्यक्तिहरु कस्ता छन्, उनीहरुले कसरी कम्पनी अघि बढाउँछन् भन्ने जस्ता कुराहरु हेरेका छन् ।
अर्काे कुरा, बैंकिङको हेर्ने हो भने उनीहरुको निक्षेपको समिश्रण कस्तो छ भनेर निक्षेपको क्वालिटी हेर्नुपर्छ । करेन्ट डिपोजिट कति छ, सेभिङ डिपोजिट कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । किनभने न्यून लागतको निक्षेप कति रहेछ भन्ने कुरा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतको लागत थाहा हुन्छ र आधार दर कति हुन्छ भन्ने तह स्रोतको लागतले नै गर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव भइरहेको हुन्छ । यो कुरा तपाईंहरुले कुन बैंकमा बढी समस्या हुने रहेछ भनेर हेर्नुभयो भने जुन, बैंकले संस्थागत निक्षेप बढी लिएका छन्, ती बैंकमा बढी समस्या देखिएको छ । संस्थागत निक्षेप १ अर्ब, २ अर्ब लिएको छ भने त्यो पैसा कहिले जाने हो भनेर डराउनु पर्यो । त्यसैले बैंकको सेयर किन्ने हो भने निक्षेपको समिश्रण कस्तो छ भनेर हेनुपर्छ ।
निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत निक्षेप कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । किनभने एक जनाले एउटा बैंकमा १ लाख राखेको होला, १० लाख रुपैयाँ राखेको होला । तर, एक जना व्यक्तिले एउटा बैंकमा १,२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राखेको त हुँदैन । व्यक्तिगत निक्षेप जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ । बैंकलाई तरलताको धेरै समस्या भोग्नु पर्ने छ कि छैन यकिन पनि निक्षेपको समिश्रणले संकेत गर्छ । बैंक राम्रो भएपछि सेयरधनीले पनि बढी लाभ लिन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
बैंकिङ कै कुरा गर्दा, हेर्ने अर्काे विषय भनेको कर्जाको गुणस्तर पनि हो । खराब कर्जा कति छ, खराब कर्जाको लागि कति रकम प्रोभिजनिङ गरेर राखिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । खराब कर्जा कम छ र भएको खराब कर्जाको लागि आवश्यक रकम प्रोभिजनिङ गरिएको छ भने त्यो बैंक राम्रो हुने नै भयो ।
संसारभरकै बैंकहरुको कुरा गर्ने हो भने जुन बैंकको निक्षेप र कर्जाको गुणस्तर राम्रो छ, त्यस्ता बैंकको निक्षेप र कर्जाको व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर पनि राम्रो छ ।
बैंकको हेर्नै पर्ने तर, धेरै मानिसले नहेर्ने गरेको विषय के हो भने गैरव्याज आम्दानी र गैरव्याज खर्च अनुपात कति छ भन्ने कुरा हो । बैंकहरुको मुख्य आम्दानी भनेको खुद व्याज आम्दानी नै हो । व्याज आम्दानीमा व्याज खर्च घटाएपछि खुद व्याज आम्दानी आउँछ । गैरव्याज आम्दानी र गैरव्याज खर्चको अनुपातलाई हामी बैंकिङ टर्मिनोलोजीमा नाफामा ‘कन्ट्रिव्युसन अफ बर्डेन’ भन्छौं ।
कुनै बैंकको गैरव्याज आम्दानी गैरव्याज खर्चभन्दा बढी छ भने गैरव्याज आम्दानीले नाफामा सोझै योगदान गर्छ । गैरव्याज आम्दानीभन्दा गैरव्याज खर्च बढी भयो भने बैंक नाफा त्यसले कति खायो भनेर हेर्ने हो । भनेको व्याज आम्दानी बाहेक अन्य आम्दानी कत्तिको ‘डाइभर्स’ छ भनेर यो सुचकले देखाउँछ । गैरव्याज आम्दानीले गैरव्याज खर्च धानेको रहेछ भने त्यो बैंक राम्रो रहेछ भनेर देखाउँछ ।
कुनै बैंकले कर्जा खासै लगानी गरेको छैन, ग्यारेन्टीमा बढी फोकस छ भने खुद व्याज आम्दानी कम होला । गैर व्याज आम्दानी बढी हुन सक्छ । यो भनेको बेग्लै कुरा भयो । सुचकहरु हेर्दा बैंकले कस्तो प्रकारको व्यवसाय गर्ने गरेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।
यस्तै, रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) र अर्निङ पर सेयर (ईपीएस) त हेर्नै परिहाल्यो ।
कतिपय अवस्थामा विगतको लाभांशको दर हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँला । कतिपय अवस्थामा विगतको लाभांश दर अप्रासंगिक पनि हुन सक्छ । किनभने कुनै बैंकको लाभांश दर हिजोको दिनसम्म राम्रो थिएन । अब व्यवस्थापन परिवर्तन भयो । व्यवस्थापन परिवर्तन भएर अब राम्रोसँग काम हुन थाल्यो भने हिजोको कुरा नदोहोरिन सक्छ । यस्तै, हिजो राम्रो भएको पनि अब नराम्रो हुन सक्छ ।
जस्तो कि हिजो कुनै पार्टीमा राम्रो नेता थियो, त्यसैले त्यो पार्टी राम्रो थियो । आज नराम्रो नेता आयो भने त्यो पार्टी नराम्रो हुन सक्छ । यस्तै, कुनै पार्टी नराम्रो नेता भएकोले नराम्रो थियो । अब राम्रो नेता आयो, त्यसैले राम्रो पनि हुन सक्छ । कम्पनीहरुको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
त्यसैले रेफ्रेन्सको रुपमा हिष्ट्री हेर्नुपर्छ । तर, हिष्ट्रीको आधारमा लगानीको धारणा बनायौं भने हामी गलत हुन सक्छौं । सेयरमा लगानी गर्नेहरुले कम्पनीको व्यवस्थापन, संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रोफाइल र कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । धितोपत्र बोर्डले सुचिकृत कम्पनीहरुका संचालक र उच्च व्यवस्थापनको प्रोफाइल नै सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइटमै राख्ने व्यवस्था गरेर राम्रो हुन्छ । त्यसले लगानीकर्तालाई निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।
म सेयर बजारबारे त्यति एक्सपर्ट त होइन । म सेयर बजारमा पनि छैन । त्यसैले मैले दिएको सल्लाहले काम नगर्न पनि सक्छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सेयरका विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर लगानी गर्नुस् । मैले खाली कमनसेन्सको हिसावले मात्रै भनेको हूँ ।
सेयर बजारमा कतिबेला सेयर किन्ने र कतिबेला बेच्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको सुन्छु । सेयरमा लगानी गर्ने भनेको जुन बेला बटमबाट अलिकति उठ्न थाल्छ, त्यो बेला सेयर किन्ने, लगानी गर्ने । र, अब बजार घट्न थाल्यो भन्ने थाहा पाएपछि सेयर बेच्ने । किनभने न्यून विन्दुमा किन्ने र उच्च विन्दुमा बेच्ने भन्ने कुरा अपबाद होला । त्यसैले अलिकति बढ्न थालेपछि किन्ने र घट्न थालेपछि बेच्ने नै उचित निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, म अहिले सेयर बजारमा नभएकोले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको सेवा प्रवाह गर्नेहरुसँग सल्लाह गरेर लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।
कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । जेमा लगानी गरेपनि प्रतिफल चाहि हेर्नै पर्छ भन्ने लगानीकर्तालाई मेरो आग्रह छ । फण्डामेन्टलम आधारित भएर लगानी गर्यौं भने कि तत्कालको पर्फरमेन्स, कि अनुमानित पर्फरमेन्समा आधारित भएर लगानी गर्ने हो ।
अहिले प्रतिफलकै हिसावले हेर्ने भने हाइड्रो र सिमेन्टको प्रतिफल बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा बढी देखियो । मदिरा कम्पनीको प्रतिफल पनि बैंकको भन्दा बढी छ । तर, मैले फेरि पनि यी क्षेत्रका कम्पनीको सेयर किन्नुस् या नकिन्नुस भनेको अर्थमा भने नबुझिदिनु होला ।
(सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अध्यक्ष भुवन दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)